Taliska Booliska oo sheegay in la soo qabtay askar dilal u gay... | Universal Somali TV
Taliska Booliska oo sheegay in la soo qabtay askar dilal u gaysatay dad shacab ah
Jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Booliska Somaliya ayaa sheegay in la soo qabtay oo lagu guuleystay askar dilal gaysatay, kuwaasi oo loo gudbiyay maxkamadda Ciidamada qalabka sida.
Wuxuu sheegay qaar ciidanka ka tirsan oo dil gaystay inay baxsadeen, balse Booliska ay ku daba jiraan sidii loo soo qaban lahaa, si sharciga loo waafajiyo.
“Dalkaan & dadkaan waxaan dareeska u gashanay in aan u khidmayno, waan u dhaaranay, shacabkana waa shacabkeena, kiisaskaasi badankooda waa ay xiran yihiin eedeysanayaasha waxaa loo gudbiyay maxkamadda awooda u leh, mana dhaceyso cid Somali ah sida ay doonto dil haku gaysatee waa in sharciga la horgeeyaa, dadka maqan ee dambiyada gaystay waa lagu raadjoogaa waana la soo qabanayaa.” Ayuu yiri Bariise.
Jeneraal Bariise ayaa digniin u diray askarta caadeysatay dareeska Ciidanka Booliska inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah, xilli maalmahan ay soo bateen askar dadka shacabka ah dhibaato u gaysaneysa.
Wuxuu sheegay in aanan loogu dulqaadaneyn askarta dadka shacabka ah dilka & dhibaatada kale u gaysanaysa.
Ciidamada Booliska ayaa tacadi kala duwan waxa ay u gaystaan dadka shacabka ah ee ku nool Muqdisho, kuwaasi oo xilliyada qaar ugu awood sheegta hubka Dowladda.
Kan-xigaShabaab oo lagu duqeeyay deegaanka Ar...
Kan-horeMaxkamadda Garisa oo sii deysay muwaa...
54,011,662 unique visits